Olile anya olile anya
Olile anya olile anya bu diamond na-acha anụnụ anụnụ nke 45.52. Nkume na-acha anụnụ anụnụ kasị buru ibu achọpụtala. Olileanya bụ aha ezinụlọ ahụ nwe ya site na 1824. Ọ bụ diamond recut si "Bleu de France". O zuru okpueze ahụ na 1792. E gwupụtara ya na India. Ndị ...
Ekele dika Angelina Jolie maka nleta a na-atụghị anya na ụlọ ahịa anyị taa
Ekele dika Angelina Jolie maka nleta a na-atụghị anya na ụlọ ahịa anyị taa. Daalụ maka obiọma gị
Njem Mogok, Myanmar
Njem Mogok, Myanmar Mgbe ị bịarutere ọdụ ụgbọ elu Mandalay, gaa n'isi Mogok maka ụgbọala 7 ọsọ ọsọ.Mgbe a ga-akwụsị na nlele, a chọrọ ịbanye "visa" nke abụọ iji banye Mogok. (ọ bụghị visa ma ikike pụrụ iche) Ụbọchị na-ebili na Mogok.It bụ ezigbo oyi n'abalị na oyi, na-ekpo ọkụ n'oge ...
Ahịa ahịa ọzụzụ na Sabara Angkor Resort & Spa
Ịzụ ahịa ahịa ọla na Sabara Angkor Resort & Spa Ms Iet na-azụ ndị nabatara na ndị nlekọta nke Sabara Angkor Resort & Spa maka ire ere anyị, ha nile bụ nanị nkume ndị dị na Cambodia.
Ajụjụ ọnụ site na TV telivishọn
Interview site na TV TV nke Vietnam M gbara ajụjụ ọnụ taa na Luc Yen, site na Vietnamese National Television, gbasara ahịa Gemstone na nsị. A na-ahazi mgbasa ozi maka ọnwa ọzọ na VTV1 na VTV3.
Interview nke French TV gbara m ajụjụ ọnụ site na M6 French TV "ENQUETE EXCLUSIVE", banyere Cambodia gemstones.
1 2 3 ... 5 Osote >